Ngwaahịa: Syndication Ọdịnaya Ngwaahịa na Nchịkwa Nri | Martech Zone
Na usoro nke Ajụjụ Ọnụ Martech ọnwa gara aga, anyị nwere onye nkwado - Ngwaahịa, Nhazi usoro nhazi ihe oriri. Egwuregwu Ecommerce dị mgbagwoju anya n'oge a, na-emesi ike ọsọ, ahụmịhe onye ọrụ, nchekwa na nkwụsi ike. Nke ahụ anaghị enyekarị ohere maka ịhazi ya. Maka ọtụtụ ụlọ ọrụ ecommerce, ọtụtụ ahịa na-eme na saịtị. Amazon na Walmart, dịka ọmụmaatụ, bụ saịtị ebe ọtụtụ ndị na-ere ecommerce na-ere ngwaahịa karịa karịa n'elu ikpo okwu nke aka ha.
Iji depụta na ịzụ ahịa Google, ma ọ bụ ree na Amazon ma ọ bụ Walmart, saịtị ecommerce gị ga-achọ ntanetị nri. Ikpo okwu ọ bụla na-enye nri ahaziri ahazi ma na-enye ọtụtụ nkwalite maka ndị na-ere ahịa iji melite ọhụụ nke ngwaahịa ha. Agbanyeghị, iwu ndepụta ndị ahụ nwere ike ịdị mgbagwoju anya - na-achọkarị mmepe nke atọ.
Nkewaputa Ecommerce Data Datapping
Nke ahụ bụ ebe a nhazi usoro nchịkọta data ntanetị abịa kemfe. Productsup na-enye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nhazi ọ bụla nke faili ntanetịime - site na ntinye aka, ahazi aha ubi, na-etinye data ndị ọzọ, na ntinye usoro maka ikpo okwu ọ bụla. Nke a bụ nseta ihuenyo nke nkewa data ha:
Maapụ data na-enye gị ohere ịlele ma hazigharị njikọ site na ndepụta ngwaahịa gị dị (kọlụm aka ekpe) na etiti gị ma ọ bụ nri nnabata (kọlụm etiti) yana site na nri nnabata gị na ntanetịime ị na-ebupụ na mbubata (ngalaba aka nri). Mgbe ịbubata nri data gị, a na-edepụta àgwà ngwaahịa na-akpaghị aka na ibe ha na ogidi abụọ ndị ọzọ (wdg. Ọrụ ịdọrọ-na-dobe na-enye gị ohere idezi ma dozie nkewa ahụ n'ụzọ ọ bụla masịrị gị.
Ngwaahịa Ecommerce Data View
Ngwa data Data Dataupupụtara inye gị ohere ịchọ, chọta ma lelee ụfọdụ ngwaahịa ma ọ bụ ngwaahịa ngwaahịa.
Productsup “nnukwu data nchọgharị” nwere a set nke nzacha na-enye gị ohere idozi site na-ele gị ngwaahịa ozi na ezigbo oge, n'agbanyeghị ma ị na-arụ ọrụ na a ole na ole narị, ma ọ bụ ole na ole nde ngwaahịa. Nwere ike ịhọrọ ma ọ bụ hụ ngwaahịa data gị import-, gị intermediate- ma ọ bụ gị mbupụ-ndepụta. Emebela ngwa ahịa n'ụzọ dị otu a iji gosipụta njirimara ngwaahịa dị iche iche n'ụzọ doro anya ma dịkwa mfe nke mere na n'otu ilele anya, enwere nghọta ngwa ngwa banyere data gị.
Nyochaa Ecommerce Data Analysis
Usoro nyocha data nke Productsups na - enyere gị aka kpughee njehie niile na ikike zoro ezo na data ngwaahịa gị n'ime sekọnd.
Productsup agwakọtala ihe ndị mmadụ chọrọ maka ọwa dị iche iche na-ebupụ na sistemụ ahụ. Njirimara nyocha ha ọkaibe na-enyocha ngwaahịa ọ bụla na ndepụta gị maka njehie, dị ka ihe oriri na-emezughị, njirimara na-efu, usoro ezighi ezi na ozi ochie. Ọ na - achọpụta nsogbu ndị dị oke egwu ma na - atụ aro igbe nnabata kwesịrị ekwesị.
Ngwaahịa Ecommerce Data Editor
Productsup's Data Editor module na-enyere gị aka imezi, hichaa ma baa ọgaranya data ngwaahịa gị iji mepụta ahaziri, kachasị data faili ntanetịime.
Ikpo okwu na-enye ọtụtụ igbe ndozi edepụtara nke ọma, na ị nwere ike itinye ya n'ọrụ ntinye na-dobe. Ndị a na-enyere gị aka ịgbanwe àgwà ọ bụla na-ezighi ezi, bulie ma kewaa data gị, yana ịchọpụta ngwaahịa ndị kwesịrị ịhapụ na mbupụ. You nwere ike wepu oghere ọcha abụọ, tụgharịa HTML, dochie ụkpụrụ, gbakwunye àgwà, na ọtụtụ, ọtụtụ ndị ọzọ. Ngwaahịa nwere nlele dị ndụ nke data, yabụ edits ọ bụla ị mere na-apụta ozugbo.
Iji njirimara nyocha A / B ha nwere ike ịkwadebe ọdịiche dị iche iche nke otu nri maka otu ọwa ahụ na-ebupụ, iji mata mgbanwe ndị na-abawanye ma ọ bụ bulie arụmọrụ. Productsup na-enye ọtụtụ ndepụta ndepụta, site na ndị na-ede oji, na ndị ọcha na usoro ịdekọ aha iji nyere aka mee ka usoro gị dị mfe na ime ngwa ngwa. Site na listi nkewapụta Otu ị nwere ike ị nwere ike maapụ data gị na ngwa ahịa ngwa ahịa nke onye ibe gị.
Ngwaahịa Ecommerce Data Export
Ngwa data Data Editor na-enyere gị aka kesaa ozi ziri ezi na ọwa aka nri.
Iji etu esi arụ ọrụ na nka ha mepụtara, Productsup arụpụtarala ndebiri ahaziri maka ọwa niile na-ewu ewu na mba ọzọ. Họrọ site na ọnụ ọgụgụ na-akparaghị ókè nke ịzụ ahịa n'ịntanetị na ebe ahịa, gụnyere Comparison Shopping Engines, Njikọ Njikọ, Ahịa, ,lọ Ọrụ Nchọgharị, Ntugharị na ntanetị & nyiwe RTB, na Social Media Platform. Ọ bụrụ na enwere ọwa ịchọrọ iji mana ahụghị edepụtara n'elu ikpo okwu, mee ka ha mata ma ha ga-agbakwunye gị ya. Nwere ike ịtọlite ​​mbupụ oghere, nke enwere ike ịhazi ya kpamkpam dịka mkpa gị.
Ngwaahịa Ecommerce Tracking & ROI Management
Nweta ihe kachasị na mkpọsa data ngwaahịa gị na sọftụwia Ecommerce Tracking nke Productsup.
Sochie arụmọrụ nke ngwaahịa gị n'ofe ọwa dị iche iche ị na-ebupụ na atụmatụ Nchọpụta Ngwaahịa & ROI. Nwekwara ike ịhọrọ ịbubata data nsuso ndị ọzọ iji nyochaa arụmọrụ nke mgbasa ozi ngwaahịa gị. Hụ ngwaahịa ma ọ bụ ọwa na-adịghị arụ ọrụ ma kọwaa omume akpaka iji jikwaa ROI gị.
Schetọ oge ngosi nke Ngwaahịa Platform
Tags: Mgbakwunye Enginestụnyere ụlọ ahịa ịzụ ahịanri ecommercenjikwa nri ecommerceecommerce ndepụta syndicationAhịanjikwa data ngwaahịanchịkọta data njikwa datangwaahịaNgwaọrụ na-ejigharịNyiwe RTBsearch enginesọhaneze mgbasa ozi
Ndụmọdụ Azụmaahịa dị elu maka ịkwọbawanye okporo ụzọ na njikọ aka